GRUB 2.06 yakatoburitswa uye inosanganisira rutsigiro rweLUKS2, SBAT uye nezvimwe | Kubva kuLinux
Darkcrizt | 09/06/2021 10:05 | Yakagadziridzwa ku 09/06/2021 18:27 | Applications
Mushure memakore maviri ebudiriro kuburitswa kweshanduro nyowani yakagadzikana yeGNU GRUB 2.06 yakaziviswa (GRand Yakabatana Bootloader). Mune iyi vhezheni itsva kumwe kugadziridzwa uye kunyanya akasiyana mabug fixes anounzwa Pakati payo panomira rutsigiro rweSBAT ​​iyo inogadzirisa dambudziko nekubviswa kwezvitupa, pamwe nekugadziriswa kunodiwa pamusoro peBootHole.
Kune avo vasingazive neiyi multiplatform modular boot maneja, iwe unofanirwa kuziva iyo GRUB Inotsigira akasiyana siyana mapuratifomu, anosanganisira epakati PC neBIOS, IEEE-1275 mapuratifomu (PowerPC / Sparc64 based Hardware), EFI masisitimu, RISC-V uye MIPS inoenderana neLoongson 2E processor Hardware, Itanium, ARM, ARM64 uye ARCS (SGI) masystem, zvishandiso zvinoshandisa iyo yemahara CoreBoot package.
1 GRUB 2.06 Makiyi matsva Akakosha
2 Maitiro ekuisa iyo nyowani vhezheni yeGrub pane Linux?
GRUB 2.06 Makiyi matsva Akakosha
Mune iyi vhezheni itsva ye GRUB 2.06 yakawedzera rutsigiro rweLUKS2 disk encryption fomati, iyo inosiyana neLUKS1 mune yakareruka kiyi manejimendi manejimendi, kugona kushandisa zvikamu zvikuru (4096 pachinzvimbo che512, kunoderedza mutoro panguva yekunyorwa), kushandiswa kwekufananidzira kupatsanura zvitupa, uye maturusi ekuchengetedza metadata nekwanisi yekudzoreredza otomatiki kubva kopi kana huwori hwaonekwa.
Tambien yakawedzera rutsigiro rweXSM module (Xen Security Modules) iyo inobvumidza iwe kutsanangudza mamwe marambidzo uye mvumo kune Xen hypervisor, chaiwo michina, uye zvinobatana zviwanikwa.
Uyewo, yekuvharira mashandiro aitwa, yakafanana neseti yakafanana yezvirambidzo muLinux kernel. Iyo yekuvhara inovhara inogona kuita UEFI yakachengeteka boot bypass nzira, semuenzaniso, inoramba kupinda kune mamwe ma ACPI maficha uye maMSR CPU marejista, inodzivirira kushandiswa kweDMA yezvinhu zvePCI, inovhara kupinza kwekodhi yeACPI kubva kuEFI akasiyana, uye haibvumidze iyo I / O chiteshi kubiridzira.
Imwe yeshanduko inomira pachena ndeye yakawedzera rutsigiro rweSBAT ​​michina (UEFI Yakachengeteka Boot Yakananga Targeting), iyo inogadzirisa nyaya nekubviswa kwezvitupa izvo zvinoshandiswa neaboot loaders yeEFI Yakachengeteka Boot. SBAT inosanganisira kuwedzera metadata nyowani, iyo yakasainwa manhamba uye inogona zvakare kuverengerwa mune dzakabvumidzwa kana dzakarambidzwa zvinyorwa zvinyorwa zveEFI Yakachengeteka Boot. Iyi metadata inobvumidza kudzoserwa kuti ishandise manhamba eiyo vhezheni yezvinhu pasina kudikanwa kwekumutsiridza makiyi ebhutsu akachengeteka uye pasina kugadzira masiginecha matsva.
Of the dzimwe shanduko dzinomira pachena yeiyi nyowani vhezheni GRUB 2.06:
Tsigiro yemipfupi MBR mipata (iyo nzvimbo iri pakati peMBR uye kutanga kweiyo disk partition; muGRUB inoshandiswa kuchengetedza chikamu cheiyo boot loader isingakodzere chikamu cheMBR) chabviswa.
Nekukanganisa, iyo os-prober yekushandisa yakaremara, iyo inotsvaga mabhuti mapati kubva kune mamwe masisitimu anoshanda uye ichivawedzera iwo kumabhoot menyu.
Mapepa ekumashure akadzoserwa akagadzirwa nematanho akasiyana eLinux
Yakagadziriswa BootHole uye BootHole2 kusagadzikana.
Iko kugona kwekuunganidza uchishandisa GCC 10 uye Clang 10 kwave kuitwa.
Maitiro ekuisa iyo nyowani vhezheni yeGrub pane Linux?
Kune avo vanofarira kugona kuisa iyo nyowani vhezheni ye grub pane yavo system, ivo vanofanirwa kuziva kuti parizvino iyo vhezheni vhezheni panguva ino (kubva pakunyorwa kwechinyorwa) hapana preompiled package inowanikwa kune chero yeLinux migove.
Saka panguva ino, kuti uwane iyi nyowani vhezheni, nzira chete iripo ndeye kurodha pasi rekodhi yekodhi uye nekuinyora.
Iyo kodhi kodhi inogona kuwanikwa kubva ku inotevera chinongedzo.
Iye zvino kuti tiite kuunganidzwa isu tinofanirwa kuvhura terminal uye mairi tichazvimisikidza isu pane dhairekitori kwatinotora iko kodhi kodhi uye tichaenda kunyora mirairo inotevera:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Applications » GRUB 2.06 yakatoburitswa uye inosanganisira rutsigiro rweLUKS2, SBAT uye nezvimwe.